Malunga neWanyu | Inkampani i-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Inkampani i-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd.
Khetha into ibe nye ebomini.
Gxila ekwenzeni iimveliso zibaluleke ngakumbi.
Uthando lokwenza iimveliso zinomphefumlo.
I-Shanghai Wanyu Medical Equipment Co., Ltd ikakhulu isebenza ekuthengiseni izixhobo zonyango, ijolise kwintengiso yezixhobo zegumbi lokusebenza, kubandakanya izibane zokusebenza, iitafile zokusebenza, kunye nezinto zokuhombisa zonyango. Umgca wonke weemveliso uthengiswa kuwo wonke umhlaba, kwaye sinamaqabane e-arhente ekhethekileyo kumazwe amaninzi eYurophu naseMelika.
NgoJuni 2003, inkampani yatyala imali ekusekweni komzi-mveliso oyingcali kuphuhliso nakwimveliso yezixhobo zonyango kumagumbi okusebenza. Emva kokusekwa komzi-mveliso, inani elikhulu leetalente zesayensi kunye nezobuchwephesha kunye nabasebenzi abaqeqeshwe kakuhle bathathiwe kwaye bahlanganiselwa ukuseka nokuphucula ulawulo lweshishini. Okwangoku, zonke iimveliso zethu zidlulile kwi-CE nakwi-ISO certification.
Okwangoku, inkampani yethu iphuhlise iitafile zokusebenza ezisebenza ngeendlela ezininzi, uthotho lwezibane zokusebenza ezingenasithunzi, iipendenti zonyango, iibhlorho zokumiswa kwe-ICU kunye nezinye iimveliso zonyango. Ezi mveliso zikwisikhundla esiphambili e-China kwaye zingeniswa ngaphandle ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zezibhedlele ezahlukeneyo. Ithengiswa kwihlabathi liphela kwaye iyanconywa kakhulu ngabasebenzisi.
Asinawo iinjineli ezingaphezu kwe-10 ze-R & D kuphela ezinoxanduva lwe-R & D eqhubekayo kunye nokuyila kweemveliso ezahlukeneyo, kodwa sigcina ubudlelwane bexesha elide kunye nentsebenziswano neeyunivesithi ezininzi.
Isisombululo sidlulile kwisatifikethi sezakhono sikazwelonke kwaye samkelwe kakuhle kushishino lwethu oluphambili. Iqela lethu lobunjineli liya kuhlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo.